Ngathi | Nokufakwa Hebei Chuangqi Vehicle Co., Ltd.
Nokufakwa Hebei Chuangqi Vehicle Co., Ltd. yasekwa ngo-2020 kwaye ngobuchule umenzi yerabha umbhobho.
Umzi-mveliso ugubungela ummandla weehektare ezi-5 kwaye indawo yokusebenzela ingama-45,000 eemitha zesikwere. Sinenkqubo epheleleyo yokuxuba irabha, inkqubo yokubanda yokutya ebandayo, inkqubo ye-microwave vulcanization kunye nenkqubo yokuluka ngesantya esiphezulu kunye neminye imigca yemveliso.
Ngaphezulu kweminyaka elishumi yemizamo eqhubekayo, inkampani inyuse utyalo-mali lobuchwephesha kwaye yazisa abasebenzi bobuchwephesha. Inkampani ine-12 yobunjineli kunye nabasebenzi bobuchwephesha, iinjineli ezi-2 eziphezulu, iinjineli ezi-4, kunye namagcisa aphezulu ayi-6. Inkampani inezinto zokusebenza: umatshini omkhulu owenza i-blister, izixhobo ezimbini zokugalela i-polyurethane kunye nesixhobo sokugalela amagwebu, enye cinezela iitoni ezingama-200 cinezela ngesanti kubunzulu baphantsi, cinezela enye iitoni ezingama-50, isixhobo esinye sokwenza into, kunye noomatshini bokucheba abathathu. Iiseti ezingaphezu kwama-20 izixhobo processing. Ukususela ekuqaleni imveliso enye ngqindilili lyu amagwebu yokubumba ukuya yangoku ezincamathelayo yokubumba kunye nenkqubo yemveliso yokubumba ucinezelo, siye efunde amava osisityebi. Ngo-2009, inkampani igqibe ixabiso mveliso liphela zizonke 10.01 yezigidi yuan wagqiba irhafu yokugcina 250,000 yuan.
Inkampani inekhulu labathengisi abaninzi kunye neenkonzo zentengiso yasemva kwentengiso kunye neeofisi ziye zakha inkqubo egqibeleleyo yasemva kwentengiso yokunciphisa iingxaki zabathengi.
Nokufakwa Hebei Chuangqi Vehicle Co., Ltd. yasekwa ngo-2020.
Umzi-mveliso ugubungela ummandla weehektare ezi-5 kwaye indawo yokusebenzela ingama-45,000 eemitha zesikwere.
Chuangqi na amandla emveliso yonyaka ka-50 yezigidi zeemitha.
Inkampani ine-12 yobunjineli kunye nabasebenzi bobuchwephesha.
Zonke zihambelana kunye nee-OEMs zasekhaya ezingaphezu kwama-30 ezinje ngeJinlong, Yutong, Ankai, kunye neZhongtong.
Ixabiso lilonke lokuPhuma
Ngo-2009, le nkampani iye yagqitywa lilonke ixabiso imveliso mveliso yezigidi 10.01 yuan.
Thina ikakhulu ukuvelisa ithumbu mveliso, ezifana imibhobho umoya, imibhobho yamanzi, imibhobho oyile, imibhobho welding, ithumbu hydraulic kunye namacandelo. I-Chuangqi lishishini elikhula ngokukhawuleza elijolise kwimveliso yemibhobho yerabha esulungekileyo kunye nemibhobho yerabha eboshiweyo, kunye namandla emveliso eziimitha ezingama-50 ezigidi ngonyaka.
Zonke zihambelana ne-OEMs ezingaphezu kwama-30 zasekhaya ezinje ngeJinlong, Yutong, Ankai, kunye neZhongtong, kunye namasebe amazwe eVOLVO naseIndiya, eNew Zealand, eThailand, eTaiwan, ePoland, kwaSirayeli, eBritane, eJiphutha, eSpain, eTurkey, IBrazil, iSingapore, iJamani kunye namazwe angaphezulu kwama-20 kunye nemimandla ifumene izibonelelo zokuxhasa.
Ukubambelela kwisiseko "sokuphucuka okuqhubekayo, ukugqwesa, ubunjani obugqwesileyo, kunye nokwoneliseka kwabaxumi", sithatha ubuchwephesha bamanye amazwe kunye nolwazi ngemveliso, siyila rhoqo kwaye siphuhlise iimveliso ezintsha, kwaye sinike abathengi iimveliso ezikumgangatho ophezulu.
Abathengi abathandekayo abadala nabatsha, kwinkulungwane yama-21 etshintsha njalo, inkampani iya kubonakala phambi kwakho ngenkangeleko entsha kraca, masihambe sibambisane ukwenza ingomso eliqaqambileyo nelikhanyayo. Siyathemba ukuba iimveliso zethu ziya kukhawulelana neemfuno zabathengi ukuya kuthi ga kumgangatho omkhulu kwaye zibancede bafumane isabelo sentengiso ngakumbi nangakumbi.